क’रेन्ट लागेर बिनोदकुमारको हात का’ट्नु पर्ने अवस्था, कृपया सबैलाई शेयर गरी सक्ने जति सहयोगको अपिल ! – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/क’रेन्ट लागेर बिनोदकुमारको हात का’ट्नु पर्ने अवस्था, कृपया सबैलाई शेयर गरी सक्ने जति सहयोगको अपिल !
रौतहटको कटहरिया–१ भसेढवा कठौतिया टोलका योगेन्द्र दाशको छोरा वर्ष १५ का आकाश दासको दाहिने हाथ का’ट्नुपर्ने भएको छ । क’रेन्ट लागेर ग’म्भीर घा’इते दाशको दाहिने हाथ जलेर कामै नलाग्ने अवस्थामा पुगेको छ । क’रेन्टको कारण हाथको रक्त संचारनै अ’वरुद्ध भएकाले का’ट्नुको विकल्प नरहेको उपचारमा संलग्न नेशनल मेडिकल कलेज बिरगंजका डाक्टर बिनोदकुमार रायले जानकारी दिएका छन ।
गत १४ गते आइतबार दाउरा लिन जंगलमा गएको समय जामुन टिप्न रुखमा चढ्ने क्रममा ३३ केभी विधुत प्रसारण लाईनको तारमा क’रेन्ट लागेर तल ख’सेका थिए । दाउरा लिनसँगै गएका उनका कान्छाभाइ १० वर्षीय अविनास दासले गु’हार गरेपछि दाउरा लिनगएका गाउँलेहरुको सहयोगमा अचेत आकाश दाशलाई एम्बुलेन्सबाट उपचारका लागि नेसनल मेडिकल वीरगञ्ज पुर्याएको थियोे ।
आर्थिकरुपमा वि’प्पन परिवारका केटा आकाशको उपचारमा हालसम्म झन्डै एक लाख रुपैयाँ खर्च भैइसकेको उनका मामा ओमप्रकास दासले बताएका छन । आकाशको उपचार लामोसमय चल्ने भएकाले धेरै पैसा खर्च हुने निस्चित देखिएको हुँदा पी’डित परिवारले आर्थिक सहयोगको लागि आग्रह गरेका छन ।